Ahoana no Natao hampiofanana Travel ho toy ny Nomad alalan'ny Eoropa | Save A Train
an-trano > Travel Europe > Ahoana no Natao hampiofanana Travel ho toy ny Nomad alalan'ny Eoropa
Train Travel, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 11/06/2022)
Raha toa ianao ka Solo dia lavitra ary tianao hampiofana mandeha toy ny Nomad, Avy eo ianao eo amin'ny toerana tsara. Train mpitety dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra namakivaky Eoropa raha te-hiaina ny zavatra rehetra izay tsy maintsy atolotra Eoropa. Na ny tanàna, na manaitra ny endriky ny voajanahary dia afaka mankafy izany rehetra izany amin'ny alalan'ny mandeha lamasinina.
Inona koa, Nandeha lamasinina ho toy ny Nomad manana be dia be ny tombony hafa. Mahazo ny hiaina ny zava-drehetra amin'ny fotoana, ary ny fiaran-dalamby manolotra anao ny fahafahana hanao izany hampandeha tsara sy tsy misy hassles. Mety ho miadana indraindray, nefa tsy misy miady saina amin'ny fomba mandeha ity, kosa fiaramanidina dia zavatra hafa tanteraka. Raha mandeha fiaramanidina ianao, misy ny adin-tsaina foana ny feno olona loatra seranam-piaramanidina sy ny fiarovana fepetra overzealous. Inona koa, Indraindray, ianao hahazo ny toerana haingana kokoa raha maka fiaran-dalamby!
Noho ireo antony sy ny maro hafa, nandeha lamasinina eo amin'ny teny no tsara indrindra zavatra azonao atao. Raha te-hanomboka ity mpifindrafindra monina mahagaga traikefa nahafinaritra, ity lahatsoratra ity dia hanampy anao amin'ny alalan'ny fanomezana toro-hevitra sy ny soso-kevitra aminao mikasika ny fomba tsara hanaovana izany.
Main Zavatra mba Diniho Rehefa te hampiofana Travel toy ny Nomad
Alohan'ny manomboka ny Train Travel ho toy ny traikefa nahafinaritra Nomad, tsy maintsy manana ny sitrapo hanao izany, ary tsy maintsy manana ny vola.
Raha te-ho mijery eny tontolo eny fiaran-dalamby dia lavitra, anao dia tsy hisy olana raha miasa toy ny freelancer, na avy amin'ny an-trano. Ny asa izay azonao atao eo amin'ny solosaina findainy, dia afaka manao izany na inona na inona toerana.
Raha ianao te hiala sasatra avy niasa tamina fialan-tsasatra, ianao no mila manampy mandany ny vola amim-pahendrena. Ny zavatra tsara dia misy vahaolana mba hanampiana.
Fantaro fa raha mandeha lamasinina ho an'ny 30days na mihoatra noho ny misafidy Interrail maneran-mandalo. Fa Single tapakila manolotra anareo ny fahafahana mandeha manerana ny ankamaroan'ny Eoropa eo tsy hanahirana, manao azy ho Nomad ny nofy. Mahazo mandeha ny fotoana sy ny toerana tianao, ary izany no fomba tsara indrindra mba hamoronana tsy manam-paharoa mandeha traikefa.
Na inona na inona no mifidy noho ny fiaran-dalamby mandeha, you can still afa-bola toy izany.
Ahoana ny fomba hitsitsiana vola rehefa manazatra ny dia amin'ny maha Nomad anao ianao
Ny zavatra tsara momba izany karazana traikefa ianao dia tsy tena hoe mandany vola. Amin'ity, dia midika izany fa rehefa manazatra mandeha toy ny Nomad, ianao hahazo traikefa tsara indrindra raha toa ka mijanona ao levitra tranom-bahiny, mahandro ny sakafo, sy ny maro hafa.
Ny tombontsoany no nofidiny izany fomba mandeha no hamonjy anao vola.
Ny ankamaroan'ny vola lany, rehefa Train Nomad Travel ho toy ny mandeha ho efitra Bookings. na izany aza, raha boky tranom-bahiny, ianao afaka mamonjy vola be toy ny ry zareo kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny takatry ary atero ho tsara kokoa sy kokoa traikefa tsy hay hadinoina. Inona koa, rehefa mandeha irery, afaka boky misy efitrano toy ny olona maro ao anatiny, dia ny levitra safidy. Ary matoky antsika, ianao no maniry izany satria hahafahanao mifanerasera amin'ireo mpandeha mitovy hevitra aminao izany.
Etsy ankilany, raha izay no tianao hihaona an-toerana, tokony hampiasa Couchsurfing, noho izany ianao hahazo ny hijanona amin'ny mponina. Plus, afaka hilaza aminao izy ireo bebe kokoa momba ny tanàna sy hampiseho aminao ny mahafinaritra rehetra mendrika ny mitsidika toerana.
Ny zavatra manaraka izay mihinana ny tahiry any amin'ny dia, tsara, mihinana. Afaka mamonjy vola amin'ny fanomanana ny sakafo amin'ny alalan'ny sakafo ao amin'ny hotely na trano. Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny sy trano dia manolotra lakozia izay azonao ampiasaina maimaim-poana. Inona koa, Hostel hafa ny fahafahana dia Hiarahana amin'ny olona sy hanomana ny sasany sakafo mizara.
Train Travel dia toro-hevitra nomad
Raha toa ianao Train Nomad Travel ho toy ny karazana extrovert, mijanona ao amin'ny tranom-bahiny dia zavatra ianao fatratra tahaka ny ho an'ny olona tahaka anao.
Raha toa ianao Train Nomad Travel ho toy ny karazana introvert, ianao tsy maintsy napetrany tao anatin'ny ezaka kely raha te-hanantona avy amin'ny hafa. Ny zava-tsoa dia ny hoe rehefa afaka andro vitsivitsy, ianao hatao zatra izany. Tamin'ny farany, ianao tia ny fomba mahazo Hiarahana amin'ny maha-olon-kafa raha Nomad dia lavitra.
Tsy voatery mampiasa fandriana hilalao onja hijanona amin'ny mponina; dia afaka mampiasa azy io koa mba hanantonana avy amin'izy ireo. Ny fampiharana dia azo ampiasaina mba hametraka fihaonana amin'ny an-toerana tia mandray vahiny amin'ny alina avy.
Mitandrema ianareo, fandrao ny pickpockets! Toy ny nitranga tamin'ny tanàna hafa eto amin'izao tontolo izao, Eoropa tanàna manana pickpockets sy ny olon-dratsy mitady hanararaotra ny mpizaha tany. Mila mitandrina, ary tokony hamaky ho eny an-pickpocket toe-draharaha noho ny toerana ianao nitsidika. Manaova fikarohana an-tserasera foana alohan'ny hitsidihana tanàna.
Mampiasa foana Apps izay afaka hahatonga ny fiainanao mandeha Nomad mampahazo aina kokoa. Ahafahany manara-maso ny fandaniana, be dia be Apps Afaka ny ho namana tsara indrindra.
Tsarovy ny Travel fahazavana. Raha handeha ianao ho fiaran-dalamby mandeha Nomad, ianao manana fotoana ihany no mora kokoa mitondra inona no ilaina. Hostels manolotra be dia be ny ny manan-danja toy ny misy ao towels, fanamainana volo, sy ny toy izany, ka tsy voatery hitondra anao. Plus, Matetika izy ireo manana milina fanasana sy ny dryers izay azonao ampiasaina ho Euro na roa, mba tsy haka akanjo be loatra miaraka aminao na. Raha te-handeha amin'ny be dia be ny zavatra, backpacking Mety ho tsara kokoa safidy.
Rehefa nozohina, fiaran-dalamby mandeha tahaka ny Nomad dia tsara tarehy sy ny traikefa manahirana-maimaim-poana. Azonao atao ny mitsidika toerana maro manerana rehetra tsara tarehy mora firenena tahaka an'i Frantsa, Alemaina, Italia, sy ny maro hafa. Plus, mahazo mahita ny tsara tarehy ambanivohitra ary ny mahatalanjona ny endriky ny toetra tsy maintsy atolotra. Tsy misy safidy hafa Travel dia hanome anao toy izany traikefa tsy hay hadinoina sy mahafinaritra.
Ataovy tsara Train Travel toy ny Nomad drafitra mialoha ary Hividy ny saran-dalana ianao Mila, ary ianao ho nametraka ny manomboka ny traikefa nahafinaritra!
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay ao amin'ny tranokalanao ve ianao, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / zh-CN ny / de na / ru sy ny maro hafa fiteny.
#traveleurope	europeantravel	europetravel	soso-kevitra	trainjourney	Tranride	fiarandalamby	tendron'ny fampiofanana	fiaran-dalamby soso-kevitra	Train Travel	traintraveltips	fiaran-dalamby nankany	Tsangatsangana	traveltips
Train Travel, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe